Banaan bax la qorshaynayo inuu ka dhaco minneapolis xili uu booqanayo M/weynaha DF ee Soomaaliya Xasan Sh Maxamuud. – Radio Daljir
Banaan bax la qorshaynayo inuu ka dhaco minneapolis xili uu booqanayo M/weynaha DF ee Soomaaliya Xasan Sh Maxamuud.
Janaayo 18, 2013 11:15 b 0
minneapolis, Jan 18- Wararka naga soo gaaraya magaalada Mineapolis ee gobolka Minesota ee dalka Maraykanka ayaa soo sheegaya in la abaabulayo Banaanbax ka dhan ah Madaxweynaha dowladda Federaaligaa ee soomaaliya Xasan sheikh Maxamuud oo saacadaha soo socda gaari doona halkaasi.
Warkan oo soo baxay waqti yar ka hor ayaa tilmaamay in qaar ka mida jaaliyadda Soomaalida ee gobolkaasi ayaa isugu yimaadeen fagaarayaal ay ku dibad baxaan marka uu soo gaaro wafdiga m/weynaha oo horay u tagay gobolo uu ka mid yahay Verginia iyo magaalooyinka waaweyn qaarkood.
Cismaan Axmed Sheekh oo sheegay inuu yahay gudomiyaha gudiga qaban qaabada banaan bax lagaga soo horjeedo m/weynaha tagitaankiisa minneapolis ayaa daljir u sheegay in m/weynaha ay ku eedeynayaan arimo kala duwan oo ay ka mid tahay inuusan ku qanacsanayn maamul goboleed laga sameeyo gobolada Gedo iyo Jubbooyinka iyo u heelanaan la’aanta Puntland.
Cismaan ayaa sidoo kale waxaa uu carabka ku dhuftay inay gudi u direen m/weynaha intii uu joogay Verginia hase ahaatee uu aqbali waayay codsigii ay u direen, isla markaana ay hada ka go’antahay qabashada bannaan bax lagaga soo horjeedo.
Cismaan ayaa sheegay in m/weynuhu uu hareer maray dastuurkii lagu doortay waa sida uu hadalka u dhigaye, isla markaana uu dawladda Maraykanka ka codsaday in Soomaaliya laga qaado cuno qabataynta hubka taasoo uu sheegay inuu u adeegsanayo dhinacyo ka midabo duwan qaranimada dalka.
Gobolka Minesota ayaa ka mida gobolada ugu badan ee ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee dalkaasi joogta, sidoo kale qayb kale oo jaaliyadda ka mida ayaa soo dhawayn u diyaarinaysa wafdiga m/weynaha Soomaaliya.
Gudoomiyaha degmada Benderbayla oo ka hadlay kalluun xeebta kasoo caariyay
(Sawirro) Halkee marayaa tartankii kubadda cagta gobolka Mudug.